यी युवतीको डान्स हेरेपछि मन्त्रमुग्ध नहुने सायदै नहोलान् । १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकाले नहेरी दिनु होस….[ भिडियो सहित ] - Taja Khabar
यी युवतीको डान्स हेरेपछि मन्त्रमुग्ध नहुने सायदै नहोलान् । १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकाले नहेरी दिनु होस….[ भिडियो सहित ]
तपाईले खोज्नुभएको भिडियोमा यो पोष्टको अन्तिममा राखिएको हुनाले भिडियो हेर्न अन्तिमसम्म स्क्रोल गर्नुहोला ।
र तलको स्वास्थ्य सम्वन्धि जानकारी पनि पढेर शेयर गर्नुहोस निकै काम लाग्छ ।
लसुनमा सल्फर नामक तत्वको मात्रा अत्यधिक हुन्छ। यसमा एलिसिन नामक तत्वको पनि मात्र उपलब्ध हुन्छ । अनि यीनै गुणका कारण लसुनले किटानुनासक तत्वालाई नष्ट पारिदिन्छ । यसमा उपलब्ध फंगल सँग लड्ने ताकत तथा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताका कारण कैयौं रोगका बिरुद्ध लसुनले रामबाणको काम गर्छ । मेचिकाली खबर अनि लसुनमाथि गरिएको एक अनुसन्धानले के देखाएको छ भने, यसमा लुकेको फाइटकेमिकल पुरुष स्वास्थ्यका लागि अति फाइदा जनक हुन्छ । उसो त आयुर्वेद चिकित्सकहरु प्रायजसो पुरुषहरुलाई राती भुटेको लसुनको ४/५ केस्रा खान सल्लाह दिन्छन् ।
चार खुट्टा र दुई योनांग भएको बच्चा जन्मिएपछि परिवारमा छायो तनाव
यिनै हुन् दोलखाका सरोज जिरेल,जसले बनाए आफ्नो घरको ढोकामा निर्मला पन्तको रंगेली (भिडियो सहित)
भारतीयले नेपालको बारेमा बनाएको यस्तो भिडियो जुन तपाईले हेरेपछि छक्क पर्नुहुनेछ, अवस्य…
तेरिया मगरको तिहारको मुखैमा अायो निकै नयाँ हट डान्स (भिडियो)
यिनै हुन् दोलखाका सरोज जिरेल,जसले बनाए आफ्नो घरको ढोकामा निर्मला पन्तको रंगेली…
पेट मिचिमिचि हँसाउने सिस्नुपानी देउसी (पुरा भिडियो सहित)